सपथ लिएसँगै विवादमा उपप्रधानमन्त्री महतो, के हो उनले भनेको बहुराष्ट्रिय राज्य ? - सुनाखरी न्युज
सपथ लिएसँगै विवादमा उपप्रधानमन्त्री महतो, के हो उनले भनेको बहुराष्ट्रिय राज्य ?
Posted on: June 6, 2021 - 9:05 am
नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो सपथ लिएसँगै विवादमा परेका छन् । देशलाई बहुल राष्ट्रिय राज्यका रुपमा लैजानलाई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्नु रहेको उनको अभिव्यक्तिसँगै उनी विवादमा तानिएका हुन् । उनको यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
गतवर्ष वैशाख १० गते सम्पन्न राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीबीचको एकताको सहमति पत्रमै बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापित गर्न तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको आँधीबेरी सृजना गर्न पार्टी एकताको घोषणा गरिएको’ उल्लेख गरिएको थियो ।
शुक्रबार नियुक्त भएका उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतोले पदभार ग्रहण लगत्तै बहुराष्ट्र र बहुराज्य सञ्चालन गर्ने मुक्ति आन्दोलन जारी रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । महतोको यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला पुनः शनिबार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) कार्यालयमा नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई गरिएको स्वागत कार्यक्रममा पनि सोही कुरा दोहो¥याए ।
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नवनियुक्त उपप्रधान एवम् सहरी विकासमन्त्री महतोको अभिव्यक्तिमाथि कडा टिप्पणी गर्दै उनको मागलाई अस्विकार र विरोध गरिने बताए ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् गौतमले नेपाललाई विघटन गर्ने आन्दोलनलाई कुनै पनि देशभक्त नेपालीका निम्ति स्वीकार्य हुन नसक्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले महतोले संचालन गरिरहेको मुक्ति आन्दोलनका सम्बन्धमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको सुन्दा आफुलाई आश्चार्य चकित बनाएको समेत बताएका छन् ।
महतोको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले नेता योगेश भट्टराई लगायतले पनि नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अराजक र संविधान विरोधी भएको बताएका छन् ।
त्यसै गरि संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले टुइट गर्दै भनेका छन् ‘फेरि बहुराष्ट्रको कुरा आयो । संविधानको सपथ लिएको व्यक्तिले यस्तो कुरा नगरिदिए हुने । देशभक्ति किन यति कमजोर हुँदै गएको ?’
उनले यो ट्वीट गरेको समयपछि नै पुनः अर्को टुइट गर्दै भनेका छन्, ‘संघीयता भित्र लुकेको अभिष्ट यही नै थियो र हो । दलित, जनजाति, मधेसी, गरीब दुखीको उत्थानको कुरा फगत बहाना थियो । सबै सजक रहौ ।’ उनले यो पनि भनेका छन् ‘बहुराष्ट्र र बहुराष्ट्रियता फरक अवधारणा हुन । सरोकार र चिन्ता बहुराष्ट्रको मात्र हो ।’
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता लक्ष्मण घिमिरेले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्बोधन गर्दै ‘तपाईंको उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोजीले संविधानको मर्म विपरीत कार्य गर्ने छैन भनी शपथ लिएको आधा घण्टा नबित्दै नेपाललाई बहुराष्ट्र र बहुराज्य बनाउने मुक्ति आन्दोलन आफूले सञ्चालन गरिरहेको अन्तर्वार्ता आयो १ तपाईंको राष्ट्रवाद भित्र यस्ता कुरा पनि पर्छन् कि रु भनेर प्रश्न गरेका छन् ।